उत्तर कोरिया–अमेरिका तनावमा रुसले के गर्ला ? – Etajakhabar
उत्तर कोरिया–अमेरिका तनावमा रुसले के गर्ला ?
सारा रेन्सफोर्ड रुसी टेलिभिजन क्यामेरासामु उभिएर उद्घोषिकाले मुस्कुराउँदै भनिन्— यसको बास्ना ताजा गराउनेवाला छ र हाम्रा मनमा हाम्रा नेताका लागि अत्यन्त धेरै इज्जत र सम्मान छ ।
अमेरिकासँग आफ्नो निजी अनुभवका कारण पनि सायद रुस उत्तर कोरियामाथि अधिक प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावको समर्थनमा छैन । किनकि, रुस आफैँले पनि अमेरिकी प्रतिबन्ध झेलिसकेको छ । मस्को कार्निगी सेन्टरका एलेक्जेन्डर गाबुइव भन्छन्— रुसलाई लाग्छ, उत्तर कोरिया सबैमाथि बम प्रहार गर्न चाहँदैन । तर, उसको कार्यक्रम दक्षिण कोरिया र अमेरिकाको हितविपरीत छ । उनी अगाडि भन्छन्— रुसलाई लाग्छ कि ऊ पनि अमेरिकाको ‘गणतन्त्रलाई बढावा दिने’ दाबीबाट त्यति नै चिन्तित छ, जति उत्तर कोरिया ।
उत्तर कोरियामा कैयौँ वर्ष बिताइसकेका रुसी राजदूत जर्जी टोलोराया सोध्छन्— हामी के गर्नेवाला छौँ रु तेलको आपूर्ति बन्द गरिदिने, ताकि वहाँ बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउने एम्बुलेन्सले काम गर्न नसकून् रु उनी अगाडि भन्छन्— रुस व्यापारमा नोक्सानीको चिन्ता गर्नुको साटो आफ्नो सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर काम गर्छ ।
यस साता चीनको यात्राका क्रममा राष्ट्रपति पुटिनले जापान र दक्षिण कोरियाली नेताहरूसित भेटघाट गरे । उत्तर कोरियाको एक प्रतिनिधिमण्डल पनि पूर्वी रुसमा भएको यस बैठकमा सहभागी भएको थियो । केही वर्षअघि मित्रताको पहल गर्दै पुटिनले सोभियत कालदेखि चल्दै आएको अधिकांश ऋण माफ गरिदिएका थिए । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र २५, २०७४ समय: ११:३७:४१